म किन कवि बनिँन? – Amrit Ghimire
एउटाले सल्लाह दियो, उपन्यास लेख्न भनेर। कथा लेख्न त त्यो हालत भएको थियो, उपन्यासमा के होला ? छुदै छोइन उपन्यासलाई त। एउटै बिधा बाँकि रह्यो मैले सकुलाँ जस्तो – निबन्ध। निबन्ध त कैयौँ लेखेँ। पढ्ने पाठक एउटै भेटेँ , त्यो पनि परिक्षाको कापि जाँच्न पर्ने बाध्यतामा। सधै २/१० वा ३/१० को छाप भन्दा केहि उपलब्धि हुन सकेन। अरु कसैलाई सुनायो तीन चोटी हाई काढ्ने।